Ngelishwa, izixhobo zikaShopify ziyasilela apha. I-Shopify inakho ukwenza ngokwezifiso ukulahla inqwelo yokuthenga kunye nezinye ii-imeyile - kodwa akukho bulumko okanye ingxelo eyomeleleyo ejikeleze bona. Umzekelo, bendingenandlela yokwahlulahlula kunye nokuthumela izibonelelo ngokusekwe kwimbali yokuthenga okanye ezinye iimpawu zomthengi.
Ukudityaniswa kukaKlaviyo kunye Shopify inomtsalane. Iyakwazi ukunxibelelana no-Shopify kunye nokwetyisa yonke idatha yabathengi, kwaye kwangoko iphumeze ukuhamba okulingeneyo. Kwinyanga yokuqala, unxibelelwano endilwenzileyo ndaza ndalakha ndisebenzisa umrhumo we-imeyile wabo wokudonsa kunye nolahlo (i-Shopify ayinayo) yafumana imbuyekezo kutyalo-mali lwe-2286% yexabiso lenkqubo. Hayi… andidlali apho.
UMike, umphathi weBrand Brand
amaphulo -Akudingi ukuba uthumele nje ukuthengisa okuzenzekelayo, ungathumela i-imeyile okanye umkhankaso wemiyalezo ebhaliweyo nanini na xa ungathanda ukuya kulo naliphi na icandelo ongathanda kulo.